कडा निषेधाज्ञाकाबीच पनि उपत्यकामा घटेनन् संक्रमित, सबैभन्दा बढी काठमाडौमा ! हेर्नुहोस् आज को ; | प्रमुख समाचार
कडा निषेधाज्ञाकाबीच पनि उपत्यकामा घटेनन् संक्रमित, सबैभन्दा बढी काठमाडौमा ! हेर्नुहोस् आज को ;
June 11, 2021 NepstokLeaveaComment on कडा निषेधाज्ञाकाबीच पनि उपत्यकामा घटेनन् संक्रमित, सबैभन्दा बढी काठमाडौमा ! हेर्नुहोस् आज को ;
काठमाडौं । निषेधाज्ञा कडा गरिएपनि काठमाडौं उपत्यकामा भने संक्रमितको संख्या घट्न सकेको छैन । परिक्षण घटाइएको भएपनि संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमि आएको देखिन्न । पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकामा मात्र १ हजार १४० संक्रमित थपिएका छन्।
विभिन्न प्रयोगशालाहरुमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा उपत्यकाका तीन जिल्लामा गरी १ हजार १४० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंका ९२१ रहेका छन्। यस्तै, भक्तपुरमा ५६ र ललितपुरमा १६३ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३७५० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर विधिबाट ९५९८ जनाको परीक्षण गर्दा २७०९ जनामा र एन्टिजेन विधिबाट ५ हजार ५८४ जनाको परीक्षण गर्दा १०४१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । हालसम्म पीसीआर विधिबाट ६ लाख ४ हजार ३९६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ एन्टिजेन विधिबाट १८ हजार ७५५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यही अवधिमा थप ५२२५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हालसम्म ५ लाख २० हजार ८१६ जना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् । नेपालमा निको हुने दर ८६।२ प्रतिशत रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६७ जनाको मृत्यु भएको छ । देशभर ८ हजार ३०५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालमा मृत्यु हुने दर १।६ प्रतिशत रहेको छ ।
साउदीमा हुनुहुन्छ? आयो यस्तो सूचना
मोटरसाइकल दुर्घ’टनामा गयो आमा को ज्या’न,छोरा घाइ’ते